Sony 4K Smart Google TV သီတင်းကျွတ်အထူး Promotion ~ The ICT.com.mm Blog
Sony 4K Smart Google TV သီတင်းကျွတ်အထူး Promotion
Sony 4K Smart Google TV သီတင်းကျွတ်အထူး Promotion ကို ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး မိဘပြည်သူအပေါင်းတို့အတွက် မင်္ဂလာရှိသော သီတင်းကျွတ်အခါသမယဖြစ်ပါစေကြောင်း အိုင်စီတီမိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကျပ်တစ်သိန်းခွဲ (၁.၅သိန်း) ထိ သက်သာစေမည့်အပြင် ကျပ်လေးသိန်း (၄သိန်း) ကျော်တန် ရေခဲသေတ္တာ၊ စမတ်တီဗွီ နှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမျိုးမျိူးကို ရက်ရက်ရောရော လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးထားတာမို့ အောက်တိုဘာ ၃၁ရက်နေ့ မတိုင်မှီ အောက်ပါလင့်ခ်လေးများကို စိတ်ကြိုက်ဝင်ရောက်ဝယ်ယူအားပေးကျပါဉီးနော်။
Buy now » https://bit.ly/3ktV0Ec
အလွယ်တကူ မိမိနှစ်သက်တဲ့ TV ကိုတန်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် တခုချင်းဆီလဲဖော်ပြထားပေးပါတယ်နော်။
* Sony 55” 4K Smart Google TV (KD-55X80J)
Shop here » https://bit.ly/2W2fpa2
* Sony 65” 4K Smart Google TV (KD-65X80J)
Shop here » https://bit.ly/39s6BgO
* Sony 55” 4K Smart Google TV (KD-55X85J)
Free Gift – Panasonic Thermo Pot (NC-EG3000CSY) + Panasonic Iron (NI 317 TVSG)
Shop here » https://bit.ly/3u26B0F
* Sony 65” 4K Smart Google TV (KD-65X85J)
Free Gift – Panasonic 1 Door Refrigerator (AF176SS)
Shop here » https://bit.ly/2XzPze1
* Sony 75” 4K Smart Google TV (KD-75X80J)
Free Gift – Sony 32-inch LED TV (KDL-32R300E)
Shop here » https://bit.ly/3kzb1sF
* Sony 55” 4K Smart Google TV (XR-55A80J)
Free Gift – Panasonic Micro computer Ricecooker (SR-CN188WSW)
Shop here » https://bit.ly/3nWNq7p
* Sony 65” 4K Smart Google TV (XR-65A80J)
Free Gift – Panasonic (1 Door) Refrigerator (NR – AF176SS)
Shop here » https://bit.ly/2W2Z6d5
* Sony 32” LED TV (KDL-32R300E)
Free Gift – SONY S’G Polo Shirt
Shop here » https://bit.ly/3u6a4eI
» အိုင်စီတီမှာ ဈေးဝယ်ရင် ပစ္စည်းတိုင်းအတွက် အပိုထပ်ဆောင်း % ပေးစရာမလိုဘဲ ဘဏ်စနစ်နဲ့ ပေးချေနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။ #KBZPay, #WavePay, #CBPay, #Visa, #MasterCard, #MPU, #UnionPay, Direct bank transfers to #KBZ, #AYA and #CB တို့ကို လက်ခံပါသည်။
Happy Thadingyut! Happy Shopping!
#ShopICT #Myanmar #SonyTV #4K #SmartgoogleTVs #Octoberfestival #ThadingyutSpecialOffer #ICT #freegifts
Newer Gaming Laptop ကို ဝယ်ယူချင်သူတွေ အတွက်
Older AOC ရဲ့ Free Gift and CashBack $20 Special Offer စတင်ပါပြီနော်